Diagnostic Kit maka 25-hydroxy Vitamin D (fluorescence immunochromatographic nnwale)
N'ihi na vitro na-achọpụta ọrịa were naanị
Biko gụọ a ngwugwu fanye ọma tupu iji na-erube nnọọ soro ntuziaka. Ntụkwasị obi nke nnwale pụta enweghị ike na-ekwe nkwa ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla deviations si ntuziaka a ngwugwu wet.
Bu n'obi eji
Diagnostic Kit maka 25-hydroxy Vitamin D (fluorescence immunochromatographic nnwale) bụ a fluorescence immunochromatographic nnwale maka quantitative nchọpụta nke 25 na-hydroxy Vitamin D (25- (OH) Vd) na mmadụ ọbara ma ọ bụ plasma, nke na-bụ-eji inwale na-etoju nke vitamin D.It bụ inyeaka nchoputa reagent.All mma sample ga na-akwado ndị ọzọ usoro. Nke a ule na-zubere maka ahụike ọkachamara were naanị.
Vitamin D bụ a vitamin na bụkwa a steroid hormone, tumadi tinyere VD2 na VD3, onye struction dị yiri nnọọ. Vitamin D3 na D2 na-tọghatara 25 hydroxyl vitamin D (gụnyere 25-dihydroxyl vitamin D3 na D2). 25- (OH) Vd na ahụ mmadụ, mụ struction, elu ịta. 25- (OH) Vd-egosiputa ngụkọta ego nke vitamin D, na akakabarede ike nke vitamin D, ka 25- (OH) Vd-atụle ga-kasị mma na-egosi maka eleru larịị nke vitamin D.The Diagnostic Kit dabeere immunochromatography na ike inye a N'ihi n'ime minit 15.
KWURU OF usoro
The akpụkpọ ahụ nke ule ngwaọrụ ntekwasa na conjugate nke BSA na 25- (OH) Vd na ule region na ewu mgbochi oke bekee IgG antibody na-achịkwa mpaghara. Welara na mpe mpe akwa na-ntekwasa site fluorescence akara mgbochi 25- (OH) Vd antibody na oke bekee IgG n'ọdịnihu. Mgbe anwale sample, 25- (OH) Vd na sample ikpokọta na fluorescence akara mgbochi 25- (OH) Vd antibody, na-etolite dịghịzi ngwakọta. N'okpuru ihe nke immunochromatography, mgbagwoju eruba na ntụziaka nke absorbent akwụkwọ, mgbe mgbagwoju gafere ule region, The free fluorescent welara ga-achọkwa na 25- (OH) Vd na membrane.The ịta nke 25- (OH) Vd bụ na-ezighị ezi mmekọrịta maka fluorescence mgbaàmà, na ịta nke 25- (OH) Vd na sample nwere ike achọpụtara site fluorescence immunoassay nnwale.
Reagents na ihe ọnọ
25T ngwugwu components :
.Test kaadị n'otu n'otu foil pouched na a desiccant 25T
.Onye nke ngwọta 25T
.B ngwọta 1
.Package fanye 1
Sample collection akpa, ngụ oge
Sample collection na nchekwa
1.The samples nwalere nwere ike ịbụ ọbara, heparin anticoagulant plasma ma ọ bụ EDTA anticoagulant plasma.
2.According ọkọlọtọ usoro anakọta sample. Ọbara ma ọ bụ plasma sample nwere ike nọ refrigerated na 2-8 ℃ maka 7days na cryopreservation n'okpuru -15 ° C maka 6 ọnwa.
3.All sample ezere akpụkọta-igbaze cycles.
The ule usoro nke ngwá ahụ immunoanalyzer ntuziaka. The reagent ule usoro bụ dị ka ndị
1.Lay onwe niile reagents na n'omume ụlọ okpomọkụ.
2.Open Obere Dịghịzi analyzer (WIZ-A101), tinye akaụntụ paswọọdụ nbanye dị ka ịrụ ọrụ usoro nke ngwá, na-abanye na nchọpụta interface.
3.Scan na dentification koodu iji gosi ule item.
4.Take si ule kaadị si foil akpa.
5.Insert ule kaadị n'ime kaadị oghere, iṅomi QR code, ma na-ekpebi ule item.
6.Add 30μL ọbara ma ọ bụ plasma sample ka A ngwọta, na mix ọma.
7.Add 50μL B ngwọta nke n'elu ngwakọta, na mix ọma.
8 .Nkume ngwakọta 15 nkeji.
9.Add 80μL ngwakọta ka ịlele ọma nke kaadị.
10.Click "nke nlereanya ule" button, mgbe 10 nkeji, bụ ngwá ga-akpaghị aka ịchọpụta ule kaadị, ọ nwere ike na-agụ na-arụpụta si ngosi ihuenyo nke ngwá, na ndekọ / ebipụta ule pụta.
11.Refer ka ntụziaka nke Portable Dịghịzi analyzer (WIZ-A101).
25- (OH) Vd nkịtị nso: 30-100ng / ml
Ọ na-atụ aro na onye ọ bụla laabu iru ya nkịtị nso na-anọchite anya ya ndidi bi.
NWALERE IHE NA Nkọwa
.Onye n'elu data bụ akwụkwọ nkeji ike maka nchọpụta data a gaa, na ọ na-atụ aro na onye ọ bụla laabu guzosie ike, a akwụkwọ nkeji maka mkpa adakarị uru nke ndị bi na mpaghara a.
.Onye ịta nke 25- (OH) Vd dị elu karịa akwụkwọ nso, na n'ahụ mgbanwe ma ọ bụ nchegbu omume ga-excluded.Indeed ndiiche, kwesịrị ikpokọta adakarị mgbaàmà nchoputa.
.Onye pụta usoro a bụ naanị na ọdabara ka akwụkwọ nso guzosie ike site usoro a, na-arụpụta ha na-adịghị tụnyere na ụzọ ndị ọzọ.
.Ọ ihe nwekwara ike ime ka njehie na nchọpụta results, tinyere oru ihe, arụmọrụ njehie na ndị ọzọ sample ihe.
.Onye kit bụ ọnwa 18 adị ndụ site na ụbọchị nke rụpụta. Echekwa ejibeghi ngwa iwu na 2-30 ° C. Adịghị akpụkọta. Unu na-eji n'ofè ngafe ụbọchị.
.Ị gaghị emeghe nke a kara akara pouch ruo mgbe ị dị njikere ịrụ a ule, na-alụbeghị di-eji ule na-atụ aro na-eji n'okpuru achọrọ gburugburu ebe obibi (okpomọkụ 2-35 ℃, iru mmiri 40-90%) n'ime 60 mins dị ka ngwa ngwa dị ka kwere omume.
.Sample diluent na-eji ozugbo mgbe a meghere.
Ịdọ aka ná ntị anya
.Onye kit ga-anọkwasị ma na-echebe megide mmiri.
.Ihe nile mma ụdị a ga-irè ọzọ usoro.
.Ihe nile ụdị ga-emeso dị ka ndi nwere mmetọ.
.Ndi BỤGHỊ iji kubie ume reagent.
.Ndi BỤGHỊ Mgbanwerịta reagents n'etiti ngwa iwu dị iche iche na ọtụtụ mba ..
.Ndi BỤGHỊ iwerekwa ule kaadị na bụla disposable ngwa.
.Misoperation, oké ma ọ bụ obere sample pụrụ iduga ịkpata deviations.
.Dika ọ bụla nnwale ọrụ òké-alụso ọrịa ọgụ, na o nwere ndabichi mmadụ mgbochi òké-alụso ọrịa ọgụ (Hama) na gbasirila. Ụdị n'aka ndị ọrịa natara preparations nke monoclonal-alụso ọrịa ọgụ maka nchoputa ma ọ bụ ọgwụ ike ịnwe Hama. Ndị dị otú ahụ ụdị nwere ike ime ka ụgha mma ma ọ bụ ụgha na-adịghị mma na ya pụta.
Ahụ .Nke ule N'ihi na naanị maka adakarị akwụkwọ, ekwesịghị eje ozi dị ka nanị ihe ndabere maka na-adakarị nchoputa na ọgwụgwọ, ndị ọrịa na-adakarị management kwesịrị mbara echiche jikọtara ya mgbaàmà, ọgwụ ihe mere eme, ndị ọzọ laabu ule, ọgwụgwọ nzaghachi, Epidemiology na ozi ndị ọzọ .
Ahụ .Nke reagent na-na-eji maka ọbara na plasma ule. O nwere ike inweta ezi apụta mgbe eji maka ndị ọzọ samples dị ka asu na mmamịrị na wdg
Arụmọrụ e ji mara
Linearity 5 and / ml 120 and / ml ikwu ndiiche: -15% na + 15%.
Linear mmekọrịta ọnụọgụ: (r) ≥0.9900
nke ziri ezi na The mgbake ọnụego ga-n'ime 85% - 115%.
(Ọ dịghị onye nke bekee na interferent anwale weghaara nnwale) Interferent Interferent ịta
1.Hansen JH, et al.HAMA nnyonye anya Murine Monoclonal Antibody-Dabere Immunoassays [J] .J nke Clin Immunoassay, 1993,16: 294-299.
2.Levinson SS.The Nature of Heterophilic-alụso ọrịa ọgụ na-arụ ná Immunoassay nnyonye [J] .J nke Clin Immunoassay, 1992,15: 108-114.
Key ka akara ji mee ihe:
Na vitro Diagnostic Medical Device
Store na 2-30 ℃
Ịkpọ ntuziaka maka ojiji
okwu: 3-4 Ft, NO.16 Building, Bio-ọgwụ Onodi, 2030 Wengjiao West Road, Haicang District, 361026, Xiamen, China
Previous: Diagnostic Kit maka D-Dimer (fluorescence immunochromatographic nnwale)
Osote: Diagnostic Kit maka gbasara obi Troponin m (fluorescence immunochromatographic nnwale)
Obi Test Kit
Diagnostic Kit maka Isoenzyme MB nke Creatine ikwu ...
Diagnostic Kit maka gbasara obi Troponin m (fluoresc ...
Diagnostic Kit maka D-Dimer (fluorescence immuno ...
Obi Diagnostic Kit-NT-proBNP